Miady Amin’ny Tsikongonià (Chikungunya) i Maldiva · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2017 3:29 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'nyJanoary 2007)
Mihanaka manerana an'i Maldiva ny Tsikongonià, fanaviana ateraky ny viriosy arahan'ny fanakotsakon'ny vanintaolana. Efa hatramin'ny faramparan'ny taona 2006 no nahitana io valanaretina io voalohany nefa tsy mbola voafehy hatramin'izao.
Miampanga ny governemanta ho miadam-piasa manoloana ity aretina mihanaka ity sady tsy mandray ny fepetra hiadiana amin'ilay valanaretina ny Maldives Today.
Nitazam-potsiny ny governemantan'i Maldiva tamin'ny fihanaky ny Tsikongonià tany amin'ny fanjakan'i Kerela any India tamin'ny volana Oktobra 2006. I Trivandrum na Thiruvananthapuram, toerana malaza indrindra any India amin'ireo Maldiviana izay mandeha any mba hitsabo tena na hiala sasatra no faritra voakasika any Kerela. Mitondra ireo mpiasa indiana sy mpandeha ary maldiviana ny sidina isan'andro mampitohy an'i Trivandrum sy Male. Resaka andro vitsy fotsiny dia mety ho tonga eto Maldiva ilay valanaretina avy any Trivandrum. Tokony raisina ho olana lehibe izay valanaretina rehetra mihanaka avy any amin'ity faritr'i India ity.
Raha nanomboka nihanaka tany Maldiva ny fanaviana tsy mahazatra miaraka amin'ireo soritr'aretin'ny Tsikongonià, dia mbola niadam-piasa indray ny governemanta.
Mavesatra ny rarintsain'ny marary, tahaka izany ihany koa ny tombana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Tsy misy fianakaviana izay tsy misy mararin'ny Tsikongonià. Mety hisy fiantraikany amin'ny famokaran'ny firenena iray ny valanaretina ary amin'izao fotoana izao, izany no ataon'ny Tsikongonià sy ny Dengy (dengue) aty Maldiva.
Voatery nakatona ny sekoly sasany noho io aretina io. Na tsy mahafaty aza io valanaretina io amin'ny ankapobeny, ny sasany tamin'ireo maty vao haingana tany Maldiva, indrindra fa ireo zokiolona, dia heverina fa matin'ny Tsikongonià, araka ny tatitry ny Minivan News.
Olona 14 no voalaza fa maty tany Hinnavaru, Lahiviyani Atoll. Ny tazon'ny Tsikongonià, izay mihanaka be any Maldiva hatramin'ny desambra no heverina fa antony. Lazain'ny loharanom-baovao avy any amin'ilay nosy fa maty tao anatin'ny telo herinandro ny ankamaroan'ireo marary ary teo anelanelan'ny 55 sy 80 taona.
“Efa maro ny olona maty, nefa tsy mbola mandray andraikitra ny Ministeran'ny fahasalamana… Amin'izao fotoana izao olona manodidina ny 300 ka hatramin'ny 400 eo ho eo no marary ao amin'io nosy io ,” hoy ny loharanom-baovao avy amina olona tsy nitonona anarana ao Hinnavaru.
Misy mpanao politika ambony sasany ihany koa voalaza fa voan'ilay aretina, isan'izany ny minisitry ny vola. Mandeha ihany koa ny tsaho fa mararin'ny Tsikongonià ny minisitry ny fahasalamana, izay zaodahin'ny filoha, saingy nisidina any Singapour mba ho tsaboina. Matetika ireo mpanao politika ngezalahy dia mamonjy toeram-pitsaboana lafo any amina firenena toa an'i Singapour, fa ireo olon-tsotra kosa dia sahirana vao mahangom-bola raha toa ka tsy maintsy mankany ivelany hanao ireo fitsaboana tsy vita ao an-toerana.
Amin'izao fotoana izao dia feno ireo toeram-pitsaboana anankiroa izay sady tsy ampy mpiasa no tsy ampy fitaovana ao Male renivohitra, ary tsy mandray marary intsony.
Taterin'ilay gazety mpiseho isan'andro Haveeru fa nokianin'ny kaomisiona mpiaro ny zon'olombelona any Maldiva koa ny governemanta noho ny nanamaivanany loatra ilay aretina.
Nokianin'ny Vaomiera Mpiaro Ny Zon'olombelona (HRC) ny governemanta noho ny nanamaivanany ny fihanaky ny Tsikongonià vao haingana sy ireo aretina sasany ateraky ny viriosy ao amin'ny firenena. Nambaran'i Ahmed Saleem, tao amina resadresaka natao tamin'ny Haveeru Daily, fa feno hipoka ny toeram-pitsaboana anankiroa ao Male ary vokatr'izany dia tsy mahazo ny fitsaboana tokon'ny omen'ny toeram-pitsaboana azy ireo marary.
Vao avy voan'ny Tsikongonià Atoa Saleem izy tenany raha ny filazan'ny Minivan News.
Nandona mafy ny governemanta ilay areti-mandringana, voan'ny fanaviana ireo mpikambana zokinjokiny ao amin'ny governemanta. Samy narary ny minisitry ny vola, Gasim Ibrahim sy ny Filohan'ny Vaomiera Mpiaro ny Zon'olombelona, Ahmed Saleem, tahaka izany ihany koa ireo mpiasam-panjakana marobe.
Mandritra izany, tantarain'ny bilaogy MaldivesHealth fa misy tsaho mombana ” zazalahy mahagaga” any amin'ny nosy Thulhaadhoo any Baa Atoll-n'i Maldiva, izay itoeranà fanahy, ary afaka manao fahagagana toy ny fanasitranana ny mararin'ny Tsikongonià.